यो होनि त तरिका, युट्युवबाट पैसा सजिलै कमाउने ! युट्युवबाट यसरी कमाउन सकिन्छ पैसा ! भिडियो सहित « Naya Bato
यो होनि त तरिका, युट्युवबाट पैसा सजिलै कमाउने ! युट्युवबाट यसरी कमाउन सकिन्छ पैसा ! भिडियो सहित
पछिल्लो समय युट्युबमा विभिन्न प्रकृतिको भिडियोहरु अपलोड गरेर मनग्ये पैसा कमाउनेहरु हामी वरपर नै छन् । सामान्य मोबाइलले खिचेका भिडियोहरु, जसलाइ सम्पादन पनि आवश्यक हुदैन त्यस्तो
खालको भिडियोहरुपनि सजिलै युट्युबमा अपलोड गर्न सकिन्छ ।
युट्युबबाट पैसा कमाउने ८ चरणहरु